आज कात्तिक कृष्णपक्ष नवमी तिथि : कुन राशीलाई लाभ, कुनलाई हानी ? – Gandaki Chhadke
आज कात्तिक कृष्णपक्ष नवमी तिथि : कुन राशीलाई लाभ, कुनलाई हानी ?
By गण्डकी छड्के On Oct 30, 2021
काठमाडौं-पन्चाङ्ग : कात्तिक महिनाको १३ गते शनिबार । कात्तिक कृष्णपक्ष नवमी तिथि । चन्द्रमा कर्कट राशिमा अश्लेषा नक्षत्र शुक्ल योग रहेको छ । सूर्योदय विहान ६ः२४ र सूर्यास्त ५ः२२ मा हुनेछ ।शनिबारको राहुकाल बिहान ९ः०१ देखि १०ः२५ सम्म छ ।
बिहान ११ः२६ देखि १२ः१० सम्म अभिजित मुर्हूत छ । हरेक दिन अभिजित मुहूर्त हुन्छ । यसलाई शास्त्रमा शुभमुहूर्त मानिन्छ ।अध्यात्मप्रति आस्था राख्नेले गर्ने शुभकर्मका लागि अभिजित मुहूर्तको समयका कर्म गर्ने गर्छन् । आजका देवता पार्वती र ग्रहदेव चन्द्र हुन। राहूकाल भएको समयमा पनि शुभ कर्म नगर्नुहोला ।
मेष (चु.चे.चो.ला.लि.लु.ले.लो.अ) मेष राशि हुनेका लागि मनमा अशान्त र निराशा उत्पन्न हुनसक्छ । पारिवारिक समस्याका कारणले मनमा चिन्ता र असन्तुष्टि हुनेछ । आजकाे दिन कसैसँग विवाद र झगडा हुनसक्छ । त्यसैले मनमा चिन्ता नराखी आफ्नो नियमित कामबाहेक नयाँ काम नगर्नुहोला ।
वृष (इ.उ.ए.ओ.वा.वि.वु.वे.वो) तपाईँले आजको दिन विगतमा गरेको कामबाट धनलाभ हुनेछ । नयाँ वस्त्र प्राप्त हुने योग छ । स्वास्थ्यमा समस्या छ भने पनि विस्तारै सुधार हुँदै जानेछ । पराक्रम गर्ने शक्ति प्राप्त हुनेछ । यदि आजको दिन यात्रा गर्नुहुनेछ भने मनमा शान्ति प्राप्त हुनेछ । बिहान सूर्योदयको दर्शन गर्नु उत्तम हुनेछ ।
मिथुन (क.कि.कु.घ.ङ.छ.के.को.ह) मनमा अनेक कुरा खेल्नेछ । परिवार र आफन्तजनले तपाईँमाथि अनेक आरोप लगाउन सक्नेछन् त्यसैले आफन्तजनसँग सम्बन्ध विस्तारका लागि पहल गर्नुहोला । एकाग्रता रहनु नै उत्तम हुनेछ ।
कर्कट (हि.हू.हे.हो.डा.डि.डु.डे.डो) चन्द्रमा समेत कर्कट राशिमा रहेका हुनाले कर्कट राशिका जातकका लागि आजको दिन सुख आनन्द प्राप्त हुनेछ । आभुषण खरिद, नयाँ बस्त्र खरिद गर्दासमेत शुभ हुनेछ । व्यवसायमा लगानी गर्दासमेत उचित प्रतिफल प्राप्त हुनेछ ।
सिंह (मा.मि.मु.मे.मो.टा.टि.टु.टे) खर्च, र अनावश्यक दुःख कष्ट भोग्नु पर्नेछ । मनमा चिन्ता र भयको त्रास हुनेछ । आफन्तजन र परिवारमा कलहको वातावरण हुनेछ । भनिन्छ, कलहको औषधि भनेको मौन हो । त्यसैले सिंह राशिका व्यक्तिले आजको दिन मौन रहनु नै भलो हुनेछ ।
कन्या (टो.प.पी.पू.ष.ण.ठ पे.पो) आजका दिन यात्राको लागि उत्तम छ । यात्रा गर्दा घरबाट बाहिर निस्कदा कन्याको दर्शन गरेर बाहिर निस्कदा शुभ हुनेछ । कन्या राशि हुनेका लागि शनिबारको दिन यात्रा शुभ मानिन्छ । आर्थिक खर्च गर्दा सोच विचार पुर्‍याउनु पर्ने देखिन्छ ।
तुला( रा.री.रु.रे.रो.ता.ती.तु.ते) तपाईँले आजको दिन सुरु गरेको काम सफल हुनेछ । घरपरिवार र मित्र मण्डलीबाट साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ । व्यापारव्यवसायमा लगानीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुनेछ । तपाईँले कसैलाई दिनुभएको धन पनि अनाचक प्राप्त हुनसक्छ । तुला राशिका हुनेले आजको दिन नजिकैको मठमन्दिरको दर्शन गर्नु उत्तम हुनेछ ।
वृश्चिक (तो.ना.नि.नु.ने.नो.या.यि.यु) मानसिक असन्तुष्टि बढ्ने छ । मनमा चिन्ता भय पनि वृश्चिक राशिका व्यक्तिले शनिबारको दिन नयाँ कामको शुरुवात नगर्नुहोला । आजको दिन नयाँ कामको थालनी गर्दा सफलता प्राप्त नहुनसक्छ । काममा दत्तचित्र भएर लागेका सफलता हात पर्नसक्छ । योजनामुताविक काम भएन भनेर निराशा हुनु पर्छ । शनिबारको दिन सूर्योदयलाई जल अर्पण गर्दा सोच अनुसार काम बन्नेछ ।
धनु (ये.यो.भा.भी.भु.ध.फा.ढ.भे) शारिरीक समस्या, आफन्तजनबाट अपमान र धनको व्यय हुनसक्छ । त्यसैले शनिबारका दिन धनु राशी हुनेले घरबाट बाहिर निस्कदा विचार पुर्‍याउनु होला । यात्रा गर्दा बाधाकष्ट हुनसक्छ । परिवारमा कलह हुनसक्ने छ । त्यसैले मनमा अनेक चिन्ता र भय छ भने यात्राबाट त्यसलाई विर्सनु वेश हुनेछ ।
मकर (भो.जा.जी.जू.जे.जो.ख.खि.खु.खे.खो.गा.गी) आयमा बृद्धि हुनेछ । व्यापारव्यवसायमा हुनुहुन्छ भने आजका दिन आफ्नो कार्यालय र पसल बन्द नगर्नुहोला । व्यापारबाट प्राप्त धनलाई भोका व्यक्तिका लागि खानेकुरा दिनुभयो भने त्यसले तपाईँको आम्दानी र र मनमा शान्ति प्राप्त हुनेछ ।
कुम्भ (गु.गे.गो.सा.सी.सु.से.सो.द) मनमा प्रसन्नता छाउने छ । कुम्भ राशी हुनेका लागि आजको दिन सोचअनुसारको काम र शत्रुमाथि विजय प्राप्ति हुनेछ । व्यापारबाट प्राप्तबाट धनलाई सामाजिक सेवामा खर्च गर्नुहोला । सामाजिक सेवा गर्दा मानसम्मान मिल्नेछ ।
मीन(दी.दु.थ.झ.ञ.दे.दो.च.ची) मनमा अशान्त, यात्राबाट निराशाजनक फल प्राप्त हुनेछ । मीन राशी हुनेले उत्तरतर्फको यात्रा गर्दा मनमा शान्ति हुनेछ । शनिबारका दिन घरबाट बाहिर जानुपर्दा उत्तरमुख भएर निस्कनु होला । किनकि चन्द्रमा कर्कट राशिमा भएको बेला उत्तर दिशाको यात्रा गर्दा मीन राशी हुनेका लागि शुभ हुन्छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो, अब ग्यासको मूल्य १५ सय